YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, February 05
Messenger News Journal ·
ခွေးရူးရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးသေဆုံးနေသောကြောင့်ပြည်သူလူထုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိပညာပေးသင့်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/05/20130အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက် DDoS တိုက်ခိုက်နေသော ဇစ်မြစ်
သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် သည်ဗွိုက် ဂျာနယ် ဖေ့ဘွတ် တိုက်ခံရ
ဒီဗွီဘီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၃
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် The Voice Weekly ဂျာနယ်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ဖေ့ဘွတ်စ် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲ ကနေ ၁၀ နာရီအတွင်းနဲ့ ၁၁ နာရီအချိန်တွေမှာ အမေရိကန်၊ မလေးရှားနဲ့ ရုရှားက အိုင်ပီလိပ်စာကနေတဆင့် DDoS ဒီဒေါစ့် Requestတွေ ပေးပို့ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“DDoS ဆိုတာက ကျနော်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၁ စက္ကန့်အတွင်းမှာ လူပေါင်းများစွာက ၀င်ပြီး ဖွင့်ကြည့်တဲ့ accessလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ လုပ်လိုက်တာ။ အဲဒါကသူက ဟို အဝေးထိန်းနဲ့လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ကွန်ပျူတာတွေ အများကြီးပေးထားပြီး၊ တချို့ ကွန်ပျူတာတွေ ကာယကံရှင်တောင်မသိဘဲ သူ့ IP သုံးပြီး တိုက်တဲ့ဟာမျိုးထိလုပ်လို့ရတယ်။ IPတွေက အမျိုးမျိုးပေါ်တယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် အမေရိကန် IP၊ ရုရှား IP ဆိုသော်ငြားလည်း အဲကလူတွေ တိုက်တာလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က ဟက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ Down သွားတာ။ လူအများကြီးဝိုင်းကြည့်သလို အဲလိုဖြစ်တာ။ ၁ စက္ကန့်အတွင်း လူတွေသန်းနဲ့ ချီဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က မနိုင်တော့ down သွားတာ။”
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအမံတွေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ကြားက တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီး အရင်ကလည်း အလားတူ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံတွေနိုင်တဲ့အတွက် သည်းခံပေးဖို့လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးက သူရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာကတဆင့် မေတ္တာရပ်ခံ ထားပါတယ်။
အလားတူ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်အခြေစိုက် The Voice Weekly ဂျာနယ်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် ဖေ့ဘွတ်စ် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ စတင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ဂျာနယ်က ဖေ့ဘွတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သတင်းတွေ တင်လို့ မရတော့ဘူးလို့ ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေက ပြောပါတယ်။
တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကို အတိအကျပြောလို့မရသလို ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာတွေက ဂျာနယ်ကို အဓိက တိုက်ခိုက်ချင်လို့ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကို တမင် တိုက်ခိုက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ admin အကောင့်တွေကနေ တင်လို့မရတော့ဘူး၊ အကုန်ဖြုတ်ချခံရတယ်။ အက်ဒမင်အကောင့်တွေကို စီးထားလိုက်ပြီး အခု ဟက်ထားတဲ့သူတွေက သတင်းတွေတင်နေတာ။ ကျနော်တို့ကို အထင်လွဲအောင် သက်သက်မဲ့လုပ်ကြံပြီး ဖန်တီးတဲ့သတင်းတွေတင်နေတာ။ ဘယ်လိုပဲ သတင်းကျင့်ဝတ်ရှုထောင့်ကနေလုပ်လုပ် ချစ်တဲ့သူရှိသလို မုန်းတဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့။ မုန်းတဲ့သူက လုပ်တာပေါ့။ လုပ်တာကလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ကလုပ်တာဆိုတော့ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်တယ်။ တကယ်ဆိုရင်တော့ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေ ရှိတယ်။ အဲဥပဒေမှာ ဆိုင်ဘာရာဇ၀တ်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ထားတဲ့အချက်တွေပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ရင် ဆာဗာကိုလိုက်ရင် ဒါတွေကပေါ်လာမှာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ Cyber Police ကမရှိဘူး။ အီးမေးလ် ၁ စောင်လက်ခံမိတာနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချတာပဲရှိတာ။ ဒီလို ဆိုင်ဘာရာဇ၀တ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အခုလို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေ၊ Facebook တွေ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ ဆက်သွယ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း ဘာမှအကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲတော့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အသက်သွင်းဖို့လုပ်နေသူတွေ တစိတ်တပိုင်းတာဝန်ရှိတယ် ပြောရမယ်။”
ဒီလိုဖေ့ဘွတ်ကနေ တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်နဲ့ Eleven Media Group ရဲ့ CEO ဦးသန်းထွဋ်အောင်တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုက်ခိုက်ရေးသားမှုတွေ၊ The Voice Weekly Facebook စာမျက်နှာ တိုက်ခိုက်ခံရမှု လူထုဝမ်းသာ စတဲ့ လူထု အထင်အမြင် လွဲမှားစေနိုင်တဲ့သတင်းတွေကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူရဲ့အမြင်ကိုလည်း ဦးကျော်မင်းဆွေက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဒီလို အဖျက်လုပ်ငန်းလုပ်တာတော့ ကျနော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစ၊ ခံယူချက်၊ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ရိုးရိုးသားသား ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ပီပီသသဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မီဒီယာတွေကို ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တယောက်ယောက်ကို ဒီလို နာမည်ပျက်အောင်၊ သိက္ခာကျအောင်၊ ပျက်စီးဆုံးရှူံးနစ်နာအောင်လုပ်တာမျိုးက ဒီမိုကရေစီနဲ့လားလားမှ မထိုက်ဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က ဒီမိုကရေစီသွားနေတယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နိုင်ငံကြီးသားတွေဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်။ ဒီလို တိုက်ခိုက်တာမျိုး နစ်နာအောင်လုပ်တာမျိုးက မသင့်တော်တဲ့ကိစ္စပါ။”
The Voice Weekly ဂျာနယ်ဖေ့ဘွတ်ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူ ၁ သိန်းကျော် ရှိပါတယ်။
အရင်ကလည်း ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာတွေကို ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဈိမနဲ့ ဒီဗွီဘီ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူး ကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်
r Ponnya Swe's photo.
"ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပဲ ထမ်းဆောင်လိုပါတယ်ဆိုတာ သမ္မတကြီးကို တင်ပြလိုက်ပါပြီ။ ပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး" ဟု ဥက္ကဋ္ဌက ဆိုသည်။
Maung Maung Oo's photo.
HIV နဲ့ လူနာတစ်ယောက် (ဘွဲ့တော့ ရတယ်၊ ပညာတတ်မတတ်တော့ မသိဘူး) လာပြတယ်။ သူရောဂါ ရှိမှန်းကို HIV အထူးကု က ရှင်းပြပြီးသား။ ဆေးရုံတက်ဖို့ လိုတော့မှ ကျနော်နဲ့ပြပြီး တက်တာ။ သူ HIV အတွက် ဆေးသောက်ချင်တယ်တဲ့။ သောက်လဲ သောက်ရမဲ့ အနေအထားကိုး။ ဆေးရုံက ဆင်းပြီး ၅ ရက်နေရင် ပြန်ပြပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ညွှန်ကြားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြန်လာပြတော့ HIV ဆေးတွေ သူစသောက်နေပြီတဲ့။ ကျနော့်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ မူလဆရာဝန်ကြီး HIV အထူးကုနဲ့ ပြန်ပြဖြစ်လို့လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မကွေးသွားဝယ်လိုက်တာတဲ့။ ပြပါဦးလို့ ပြောတော့ HIV ဆေး ၂ မယ်ထဲ ၂မျိုးထဲပါတဲ့ဆေး (၃မျိုး ၃ မယ် သောက်ရမယ်ဆိုတာလဲ သိဟန်မတူ)။ ဒါနဲ့ ဘယ်သူပေးလိုက်တာလဲ လို့ မေးကြည့်တော့ နာမည်ကြီး ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်ပါတဲ့။ ၂ မျိုး ၃ မျိုး ထုတ်ပြလိုက်သေးသတဲ့ (လုံချည် အဆင်ရွေးသလို ကြိုက်တာယူဆိုတဲ့ သဘောမျိုး)။
လူနာတွေ ပြည်သူတွေ မသိတာထားတော့။ Part2ကျောင်းသားလေးတွေကို မကြာခဏ ကြုံရင်မေးကြည့်မိတယ်။
“Amoxicillin (Amoxil) ဆိုတဲ့ ဆေးဟာ လူနာဘာသာ ဆေးဆိုင်မှာ ကြိုက်သလို ၀ယ်သောက်ခွင့်ရှိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ဆေးလား။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှ ၀ယ်သောက်ရတဲ့ (Prescription Only Medication) ခေါ် သမားကိုင်ဆေးလား”
ရင်ကွဲလောက်တဲ့ အဖြေပေးတယ်။ “ (OTC = Over The Counter) ဆေး” ပါတဲ့။ နောက်ဆုံးနှစ် ဆေးကျောင်းသား ဆရာဝန်လောင်းလေးတွေက ညီညီညွတ်ညွတ်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြီး ဖြေကြတယ်။ Pharmacology က မသင်ဘူးလား ဆိုတော့ သင်ဘူးတဲ့။ ကျနော်က “ဒါဆို စာလုံးဝ မတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က အဲဒီဆေးကို ဘယ်ရောဂါမှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ရက်သောက်ရမယ် ဆိုတာ သူသိနိုင်သလား” လို့ ထောက်ပြရပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ဘယ်ဆေးတွေက ကြိုက်သလို ၀ယ်သောက်ခွင့်ရှိတဲ့ (OTC = Over The Counter) ဆေး၊ ဘယ်ဆေးတွေကတော့ သမားကိုင်ဆေး (Prescription Only Medication) ဆိုတာ ပညာပေးဖို့လည်း လိုပြီ။ ထိမ်းချုပ်တဲ့ စနစ်လည်း လိုပါပြီ။
အဲလိုမလုပ်ရင် ဆေးမတိုးသော ရောဂါတွေ မြန်မာပြည်က စပါတော့မယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက် ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
အမျိုးသားမြစ်ကြီး ထာဝရရှင်သန်ဖို့ ဧရာဝတီမြစ် ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့ အဆိုတစ်ခုကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမြင့် က တင်းသွင်းခဲ့ရာမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အများစုက ထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် က ကြေညာခဲ့ပြီး အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၁ က ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ချစ်လွင် ကလည်း ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တွင်းကုမ္ပဏီ၊ ရွှေမျှောလုပ်ငန်းတွေကြောင့် မြစ်အတွင်းသဲသောင်ထွန်းမှုတွေ များလာနေတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးက ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နယူးဇီလန်၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အော့တာဂို တက္ကသိုလ် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ နှင့် ပူးပေါင်း
အော့တာဂို၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၅ ။
နယူးဇီလန်၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော အော့တာဂိုတက္ကသိုလ် University of Otagoသည် မြန်မာတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဆေး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ နှင့် ပူးပေါင်းကာ လေ့ကျင့်ရေး၊ သုတေသနနှင့် လူ့စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးဌာနပူးတွဲ ဒါရိုက်တာ ပါမောက္ခ ခရမ့်ပ်က ၎င်းသည် ၂၀၁၁တွင်
အော့တာဂို တက္ကသိုလ်သို့ ရောက် ရှိစဉ်မှစ၍ အရှေ့ တောင် အာရှဒေသတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် တက္ကသိုလ်များ ရှာဖွေခဲ့ပြီး မြန်မာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည် ။
၎င်းက ယခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ကူးစက်ရောဂါ ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွားသော အဖျားရောဂါ လက္ခဏာ များကို လေ့လာမည်ဖြစ်ကာ ကျန်လူဦးရေ သန်း၆၀ အတွက်လည်း အသုံးဝင်မည်ဟု ပြောကြားသည်။
တက္ကသိုလ်နှစ်ခု ပူးပေါင်းရေးအစီအစဉ်အရ တစ်ခုစီမှ ဘွဲ့ လွန်ကျောင်းသားနှစ်ဦးစီ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ပေး
သွားမည်ဖြစ်ကာ သုတေသန လုပ်ငန်းများပူးတွဲလုပ်ဆောင် စေမည်ဟု သိရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျောင်းသားချင်း လဲလှယ်စေလွှတ်မှုမှာ ပိုများလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ပါမောက္ခ ခရမ့်ပ်က “မြန်မာမှာရှိတဲ့ ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းဟာ မကြာသေးမီ အချိန်ကအထိ ကမ္ဘာနဲ့ အပြန်အလှန် လွတ်လပ်စွာ မထိတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ ဟာ ယခင်က အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလိုမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိဖို့ သိပ်စိတ်အား ထက်သန်နေကြပါတယ် ” ဟု ပြောကြားသည်။
ပါမောက္ခ ခရမ့််ပ်သည် မြန်မာသို့ ယမန်နှစ်က လာရောက်လည်ပတ် ခဲ့ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရန် သဘောတူညီမှု ရ ခဲ့ခြင်းမှာ ထူးခြားသည့်အလားအလာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်နေသည်။
ဘာလို့ (((၈ သိန်း)))ထဲ ရေးသလဲ
Thenanda Tun's photo
‎*****သိန်း ၈၀ နှင့် ၈ သိန်း အလွဲ*****
မနေ့က အစိုးရဘဏ် အင်းစိန်ဘဏ်ခွဲမှာ ငွေသွားအပ်ဖြစ်တယ်။
ရောက်သွားတော့ ပထမ စားပွဲက လူက ငွေကို လက်ခံ စက်နဲ့ ရေ စာအုပ်ထဲကို သွင်း နောက်တော့ အဲ ဘဏ်စာအုပ်ဟာ တစ်စားပွဲကနေ တစ်စားပွဲကို ကူး တုံးတွေထု နဲ့ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ဆီပြန်ရောက်လာတော့ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ
၈ သိန်းပဲ ရေးထားတာကို အံ့သြစွာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ချက်ချင်း တာဝန်ခံကို သွားပြောတော့ တာဝန်ခံက.............
"ဟာ ....ဒီဘဏ်စာအုပ်က သေနေပြီပဲ။ အသစ်လဲရမှာပေါ့။" တဲ့
"အဲဒါဆို ကျွန်တော့ကို ခင်ဗျားတို့ အစက ဘာလို့ မပြောသလဲ
နောက် ကျွန်တော် အပ်တာ (((သိန်း ၈၀))) ပဲ
ဒါကို ကျွန်တော်က မကြည့်မိဘဲ အပြင်ထွက်ပြီးမှသာ သိရင် သွားပြီပေါ့။" လို့ ပြောလိုက်တော့
"ခင်ဗျား စာအုပ်ကြီးက သေနေတာပဲဟာ" တဲ့။
**သေနေတဲ့ စာအုပ်မှန်း ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက မသိပဲ နေမတဲ့လား
**သိရင် ဘာလို့ သေနေတာကို အသိမပေးဘဲ ငွေတွေ ရေးသွင်းသလဲ
**သိန်း ၈၀ ရေးတာ သုည တစ်လုံး ကျန်ခဲ့ပါတယ် ဆိုရင်တောင် အင်္ဂလိပ်လို Eighty Lakhs လို့ ဘာလို့ မရေးသလဲ
** သိန်း ၈၀ နဲ့ ၈ သိန်းကြားက ကွာဟချက် ၇၂ သိန်းက ဘယ်ရောက်သွားမှာလဲ
မန်နေဂျာနဲ့ ဝင်တွေ့ပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောမလို့ လုပ်ပေမယ့် မန်နေဂျာက ဧည့်သည်တွေနဲ့ စကားပြောနေတာက တကြောင်း ကိုယ်ကလည်း အချိန် လောနေတာက တကြောင်းကြောင့် မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံး ကိုယ့်ပိုက်ဆံထုပ် ကိုယ်ပိုက်ပြီး ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ကို ချီတက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
(ယောက်ျားလုပ်သူ၏ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံအား နောက်လူများ မခံရစေရန် တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သတိ ရှိကြပါကုန်.........။)
ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၁၄ လည်းနီးလာပြီ မိန်းကလေးတွေကိုသိစေ ချင်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့အခါခွင့်လည်းကြံသမို့ေ၇းပြီးတင်လိုက်တာပါ ။အား
အားလုံးစောင့်နေကျတဲ့ ချစ်သူများနေ့ ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၁၄ လည်းနီးလာ
ပြီဗျ။ချစ်တဲ့သူစုံတွဲတွေလည်း အစီစဉ်တွေဆွဲကုန်ကြပြီ ။တချို့ကလက်
ဆောင်ပေးဖို့ပြင်တဲ့သူလည်းပြင်ပေါ့ဗျာ ။ ဒါပေမဲ့သူတို့တွေထက်အကွက်
ချင်တယ်။ တခြားသူတွေတော့မပာုတ်ပါဘူး လူလည်ယောကျာ်းဘသား
မှတ်နေကြတယ် ၁၄၊၁၆၊၁၈ အ၇ွယ်တွေအဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာ။ ဒင်းတို့ကလည်း
ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၁၄ မှာ ကော်ဖီသောက်၇င်တောင်သတိထား
သောက်ပါဗျာ ။အဲ့ဒီကော်ဖီကအဆိုးဆုံးပဲဗျ ၊ဘာလုိ့လဲဆိုတော့ ကော်ဖီကထိ
ကိုတိုက်လိုက်၇င်ချင်ခြင်းအာ၇ုံကြောထဲအထိနိုးဆွတော့တာပဲဗျာ ။ တော်ယုံ
လည်းမှာပါ ) အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ ကိုကိုမောင်တို့ လက်ကစားပြီးနှုတ်ခမ်းလေး
နဲ့ကစားလိုက်လို့ကတော့ ပွဲသိမ်းပြီပေါ့ဗျာ ။ ကိုယ်ကအဲ့ဒီဆေးဝင်သွားတဲ့အချိန်
တယ်ဗျာ (pH7) တောင်မလွတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းလာတဲ့ဆေးတွေကပိုတောင်မြင့်
လာသေးတယ်။ အနံမ၇ှိဘူး၊အေ၇ာင်မထွက်ဘူးလုံးဝမသိသာဘူး။ ၁လီတာဘူး
မသိဘူး အဲ့ဒီဆေးတစ်ဘူးမှအကောင်းစားတောင် ၄၅၀၀ ကျပ်ပဲပေး၇ပါတယ်။သုံး
ကတော့ ပီကယ်လ်(ပူ၇ှိန်း)တွေပါပဲ။ သူဆို၇င်ပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ် တစ်ကဒ်
မှ ၅၀၀ကျပ်ပဲပေး၇ပါတယ် ၅၀၀တန်တစ်ကဒ်မှာ ၄လုံးပါပါတယ် ၂လုံးလောက်သာ
ကျတော့ Feel ဆေးမပာုတ်ပါဘူး သူကလူကိုလွတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပါ။
ကိုကို တို့ မောင် တို့သာ လှုပ်၇ှားသွား၇င်ပါလို့ပါသွားမှန်တောင်သိတော့မှာမပာုတ်ပါ
ဘူး ။ပြီး၇င်တော့ အဲ့ဒီဆေးကကိုယ်စားလိုက်မိပြီဆိုတာအ၇မ်းသိသာပါတယ်၊ခေါင်း
ကျွန်တော်ပို့စ်က အနည်းကျဉ်းတော့သတိထားနိင်ဖို့ အသိပေး၇ာေ၇ာက်မယ်လို့
မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ။ တစ်ခြားဆေးတွေလည်းအများကြီး၇ှိပါသေးတယ် ။အခုကျွန်
ကဲ.........ချစ်သူများနေ့ကို အမည်းစက်တွေမစွန်းထင်ပဲ ဖြူဖြူစင်စင်ဖြတ်သန်းလိုက်
တပ်မတော်အရာရှိအချို့က EMG ကိုHECK လို့တိုင်ကြားစာ
တရုပ်က ထိပ်သီးခြစားမှုဘလော.ဂါတစ်ဦး ဖေါ်ထုတ်မှု
တရုပ်ပြည်က ထိပ်သီးအကျင်.ပျက်မှုတွေနှင်. ပတ်သက်၍---
တရုပ်ပြည်မှာတောင်၊ အစိုးရ အရှုတ်ထုတ်တွေကို ဖေါ်ထုတ်တဲ. muckraking journalism အရေးပါတဲ. ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။
muckraker တရုပ်သတင်းသမားတစ်ယောက် ဖေါ်ထုတ်မှုက စလို.
ပေါ်ခဲ.တဲ. တရုပ်က ထိပ်သီးခြစားမှုလည်းဖြစ်၊ ပြီးတော.- စီးပွားရေးကြောင်.ဖြစ်တဲ. major economic crime ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ၁- လေဒီဂေါင် Ms. Gong Aiai aka House Sister
ဓါတ်ပုံ ၂- ပြည်သူ. သတင်းထောက် citizen journalist Zhu Ruifeng ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လွတ်လပ်တဲ. ဘလော.ဂါတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခြစားတာတွေကို ဖေါ်ထုတ်ချင်တဲ. ဆန္ဒပြင်းပြသူလို.ဆိုပါတယ်။
တရုပ်ပြည်က သမ္မတသစ် ရှီ၈ျင်ပင်း က သူပထမနှစ်မှာပဲ ထိပ်ပိုင်းကခြစားမှုတွေ နဲ. အတူ ပါတီတွင်းသန်.စင်ရေး အထူး ဆေးကျောသုတ်သင်ရေးလုပ်မယ်လို.ဆိုခဲ.တာ မှတ်မိဦးမှာပါ။
ခု-တရုပ်ပြည်မှာ လူ ဖမ်းပွဲတွေစနေပါပြီ။ ဖေ.ဘွတ် နဲ. အလားတူ တရုတ်ဗားရှင်း ဝေဘိုလို.ခေါ်တဲ. ဆိုရှယ် လူမှုကွန်ယက် သုံးသူတွေ အကြီးအကျယ်ထောက်ခံတဲ. လူဖမ်းပွဲတွေလို. ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘဏ်အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ. လေဒီဂေါင် ပီကင်းက ရဲတွေ နဲ.ပေါင်း အလွဲသုံးစားတွေ လုပ်၊ အိမ်ယာမြောက်မြားစွာ
ပိုင်ဆိုင်နေတာကို က မိုက်ခရို ဘလော.ဂါ တစ်ဦးက စ ဖေါ်ထုတ် ခဲ.ပါတယ်။
အဖမ်းခံရသူတွေက ရှန်ဇီ ကျေးလက်စီးပွားရေး ဘဏ် ဒု ဥက္ကဌဟောင်း- လေဒီ ဂေါင် Ms. Gong Aiai nicknamed as House Sister ဖြစ်ပါတယ်။
လေဒီဂေါင် ဟာ အိုင်ဒီအတု စာရွက် စာတမ်းအတု သုံးပြီး ပီကင်း က တန်ဘိုးကြီး အဆောက်အဦ ၄၁ လုံးကို ၀ယ်ခဲ.ပါတယ်။ ခု အားလုံးကို အစိုးရက သိမ်း လိုက်ပါပြီ။ အလားတူပဲ သူမကို ကူညီခဲ.တဲ. ပီကင်း နဲ. ရှန်ဇီဒေသက ရဲတပ်ဖွဲ.၀င် စုစုပေါင်း ၁၂၁ ဦး ကိုလည်း လာဘ်ပေးလာပ်ယူ ပြစ်မှု ထင် ရှားလို. ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး လျှက်ရှိပါတယ်။
တရုပ်ပြည်မှာလည်း(မြန်မာပြည်မှာလိုပါပဲ)။ အိမ်မြေယာဈေး တွေဟာ အာဏာနဲ.ငွေရှိသူတွေစုပေါင်း
ဈေးကစားမှုကြောင်.တော်ရုံလူတွေ မ၀ယ် နိုင်တော.လောက်အောင် အိမ်ဈေးတွေ မြို.ကြီးတွေမှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ထိုးတက်နေပါတယ်။
ရှန်ဇီ က ကျေးလက် စီးပွားရေးဘဏ် ဒုဥက္ကဌဖြစ်ခဲ.သူ လေဒီ ဂေါင် ၀ယ်ခဲ.တဲ. အိမ်နဲ. အဆောက်အဦ အလုံးပေါင်း ၄၁ လုံး ၏
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၀ သန်း ကျော် ရှိပါ တယ်။
မှတ်ချက်==ပါတီဝန်ထမ်းများ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်ရေးကော်မရှင် CCDI ( Central Commission for Disciplinary Investigation ) ၏ ၂၀၁၃ နွေဦး ပေါ်လစီအရ ဆို- လေဒီဂေါင် အနည်းဆုံး ထောင် ဒဏ် ၁၅-၂၀ နှစ် ရနိုင်ပါတယ်။ သို. မဟုတ် သေဒဏ် လည်းရနိုင်ပါတယ်။ သေဒဏ်ကို တဆင်.လျှော.တဲ. ဆိုင်းငံ.သေဒဏ် suspended death sentence လည်း ၇နိုင်ပါတယ်။
2-Latest Corruption Scourge in China Centers on Housing
By CHRIS BUCKLE, February 5, 2013. The New York Times
မြန်မာပြည်သူ ၁၀ သန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေး ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကူညီပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံဒေသအားလုံးမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိတဲ့ ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုနိုင်ဖို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်တွေကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ဒီကနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်း IFC (International Finance Corporation) ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဂျင်ယောင်ချိုင်း က ရန်ကုန်မြို့၊ ချက်ထရီယမ် ဟိုတယ်မှာ ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့တာပါ။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့်လပိုင်းအတွင်း နောက်ထပ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၃၀၀ မီဂါဝပ် တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင် ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီ့အကူအညီကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းက ပြည်သူ ၁၀ သန်းလောက် လျှပ်စစ်မီးရရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ဂျင်ယောင်ချိုင်း က သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးရာမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်ပို့ကုန်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ရေး စတဲ့ ရေရှည်အစီအစဉ်တွေလည်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ လာအိုနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်ကို ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ ပေးဝေနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ကူညီခဲ့တာကြောင့် လာအိုပြည်သူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျှပ်စစ်မီးသုံးနေနိုင်ကြပြီး၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြည်သူ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဂျင်ယောင်ချိုင်း ဦးဆောင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့အပြင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်က ခေါင်းဆောင်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးရေးအပါအ၀င် ရေတိုရေရှည်ကူညီရေး စီမံကိန်းကိစ္စရပ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ Mr. Anoop Singh နှင့်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်နေအိမ်၌ ယနေ့ညနေ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (5-202013)
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက် DDoS တိုက်ခိုက်နေသေ...
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု...
နယူးဇီလန်၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အော့တာဂို တက္ကသိုလ် ရန်...
ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၁၄ လည်းနီးလာပြီ မိန်းကလေးတွေကိုသိစေ ချင...